Waphonseka emhlabeni umdlalo, ungakwazi ulahleke ngekwehlukahlukana kwalo, ngoba amaphrojekthi abezindaba kakhulu kangangokuba bakhethe esivuna eyodwa nzima kakhulu. Gamer Real uyazi ukuthi ngaphambi kokuqala lokhu noma lokhuya umdlalo, kuwufanele ukwazi ngakho kafushane: Gameplay, indaba, yezinjongo eziyinhloko. Ngakho ngo-2014, ezikrinini ka wonke amakhompyutha amageyimu ushiye umdlalo Amakhosi Xulima. Walkthrough, izinhlamvu, izithombe kanye lwendaba - konke lokhu kule phrojekthi yakhelwe kahle. Kukhona pluses kanye minuses. Kodwa siyini ekhetheke lo mdlalo phezu amanye amaphrojekthi afanayo?
Uma sikhuluma uhlobo ke lo mdlalo isenzo - a RPG zakudala, lapho lwendaba - ingemuva, ngoba kuthathwe njengesisekelo igcizelelwa ucwaningo, uzotshala uhlamvu lwakho siqu kanye ukusinda kule ezweni lamaphupho. By the way, Gameplay angacabanga kakhulu: indaba iqala kulelivekati efanayo - the wasenganekwaneni, imilingo. Kulapha oke wahlala umdali zezwe, kodwa kunalokho wokuthula lapho kuyimpi wonkulunkulu nabantu. Ilungu zokuba omunye lezi zihambi, futhi uyilungu leqembu ehlanganisa 5 abangabazi. Zonke eziyokwenzeka endleleni yonke indlela kuleli zwe - kuba umzabalazo engapheli, lapho kuyadingeka ukuthatha ingxenye ukuze sisinde. Kuyinto Gameplay umxhwele kwenza yezimo abhekene ukuqala Lords umdlalo Xulima. UMzila siyophila isikhathi eside, ngoba umdlalo has inqwaba yezindawo legatsha nezimfuno.
Kanjani futhi yini ukwenza umsebenzi?
lwendaba Dynamic sishoda lapha, amavidiyo Chic ngakho opopayi futhi ingabonakali, kodwa ukuthi kukhona futhi ngezinga elikhulu - le mpi. Gamers zama umdlalo, uqaphele isikhathi ndima. Kuzothatha amaviki ambalwa kokusebenza kanzima ukuze ube "ehloniphekile" uhlamvu and win zonke ezinye impi. Ukuze "ukumpompa" uhlamvu yakho ngisho nangaphambi ziqu kuqala kudingeka suku.
Kuphela ngemva kwalokhu uhlamvu ngokuqina, kuyoba isilungele izimpi sina. Kuze kube kungenzeka ukuqhubeka nempi, une ukubhekana ezinye izinto asinantshisekelo kakhulu Lords umdlalo Xulima. UMzila lapha iqala emkhakheni ukuvikelwa ezilo, kubutsela amakhowe kanye namakhambi. Ngokuvamile, ezingeni lokuqala - akusiwona ezithakazelisayo ingxenye, lapho konke umoya "ukuqoqa 20 amahlamvu Cupid bese uzithola uhlamvu." Mhlawumbe, lokhu kuyinto ephawulekayo futhi umdlalo Amakhosi Xulima. UMzila akuyona okuyisidina futhi ukunika umdlali ithuba lokusho okusenhliziyweni yabo, etimeni letehlukene.
Project ngamunye inezici ayo ehlukile, futhi kukhona omkhulu umdlalo wonke. Map bethenjiswa inzalo enkulu, futhi, okumangalisayo eziklanywe kahle. izwe elingaziwa beckons nge imfihlakalo yayo, izindawo, futhi isimo engavamile (emifuleni, izimpophoma, izintaba).
Protagonist yomdlalo - shin, kodwa isici phrojekthi ukuthi emcimbini othile, kwathi ekuqaleni the game udinga ukukhetha izinhlamvu 5 kwama-class ehlukene bebodwa noma ukuthemba computer nemiyalezo ngokukhetha.
Izimpi kule mdlalo kukhona uhlelo zakudala: lokuqala umuntu buka, kukhona isinyathelo ngesinyathelo ukudlala imodi, impi phakathi abomdabu nabokufika isitjhijilo. Ungakwazi ukufaka ngokwakho, ngubani 5 abahambi uyovikela, ukuhlasela umuntu, futhi umuntu uyokwenza magic, ngiphuze Potion e umdlalo Amakhosi Xulima. UMzila e imiyalelo Russian futhi enembile kuphi futhi ngasiphi iphuzu okudingeka ukulwa nalapho ukuphumula, kuzokwenza ukumpompa uhlamvu yakho nge impumelelo esiphezulu. Ukuze sibalo sekukhule kakhulu ezicini zonke, kubalulekile ukuba unake okukhethekile ku imisebenzi ezincane kanye nesu le mpi. Ngisho nokubonakala kwalokhu umqulu impi - kungcono uphawu. isidingo sakhe esiphuthumayo ukuvula, ngoba kungaba ukunikeza enhle ibhonasi.
Uma sicabanga obengeziwe bokuthi lokho izici kukhona izinhlamvu, ucezu lokuqala futhi ezisobala kakhulu - indlala yokufuna isihambi ngamunye eqenjini imidlalo yakho Amakhosi Xulima. Mavesi ekuthululweni Russian nje lisitshela ukuthi wonke amalungu ethimba kudingeka ngaso sonke isikhathi wondle: isikhunta ezivamile futhi izitshalo ngeke kwanele, ngakho lento kuyoletha ubunzima obuthile ukuthi ungathandi abadlali. Ngokusho abahlanganyeli kukhona ndima nzima kakhulu umdlalo. Amakhosi Xulima - RPG izinga, kodwa kunzima kakhulu ekilasini yayo, futhi abaningi bakholwa ukuthi esimeni esintekenteke.
Ukugubha abadlali wukuthi ezinye izindawo kungaqedwa e amaminithi ambalwa, kanti abanye kufanele achitha usuku lonke. Enye yezindawo yisakhiwo sodumo kakhulu umdlalo ubhekwa Amakhosi Xulima ethempelini. UMzila kunzima ikakhulukazi, ngakho-ke, ngoba impi kuleli qophelo kudingeka ukuqoqa kunazo zonke amakhambi, amakhowe nokunye.
Ngamafuphi, lo mdlalo enhle ngendlela yalo, ngoba Arcade zakudala - lokhu kuyinto impi engapheli. Labo ungathandi ezingenanjongo kanye engapheli mpendulwano, ikakhulukazi sengathi lo mdlalo.
Umthamo Market - inkomba ukhiye ukuze kwakhiwe amasu ibhizinisi
Juni Icebo lika Okwesithathu ngo-1907